सन्तोष लामा, गायक
२०७६ श्रावण ५ आइतबार ०८:४६:००
फिल्म हेर्ने फुर्सद छ ?
तीन–चार वर्ष पहिलेसम्म एकदमै धेरै हेर्थें । अहिले किताबहरू पढ्ने गरेको छु । त्यसकारण तुलनात्मक रूपमा कम हेर्छु । तर, राम्रा फिल्म छाड्दिनँ । फिल्म हेर्न मन पराउँछु ।
पछिल्लो समय हेर्नुभएको फिल्म कुन हो ?
मैले पछिल्लो समय जात्रै जात्रा हेरेको थिएँ । त्यो फिल्म एकदमै बबाल लाग्यो । त्यो फिल्मले नेपाली फिल्म राम्रो बन्दैनन् भन्ने गुनासा मेटाएको ठानेँ । पहिला जात्रा पनि हेरेको थिएँ । त्यसको सिक्वेल मिलाइएको रहेछ । फिल्मले दर्शकलाई बाँधेर राखी क्लाइमेक्ससम्मै एकदमै इन्ट्रेस्टिङ बनाउन सकेको छ । सायद त्यही भएर पनि ५१ दिन मनाउन सफल भयो । फिल्म मलाई एकदमै राम्रो लाग्यो ।
कस्ता फिल्म तपाईंको रोजाइमा पर्छन् ?
म बीचमा अंग्रेजी सिनेमा एकदमै धेरै हेर्थें । त्यसमा पनि अरूलाई अल्छी लाग्ने खालका आर्ट मुभी हेर्थें । गीत पनि त्यस्तै गाउन मन पराउँथेँ, त्यतिवेला । पछिल्लो समयचाहिँ यो वा त्यो भन्ने छैन । राम्रो भयो भने जुनै सिनेमा पनि हेर्छु । जुनकुनै भाषाको पनि हेर्छु ।
परिवारसँग हल जानुहुन्छ ?
म अहिले विवाहित हुँ । लभ परेको वेला गर्लफ्रेन्डसँग फिल्म हेर्न खुबै गएँ । त्योबाहेक मेरो साथी धर्मेन्द्र सेवानसँग पनि फिल्म हेर्न जान्थेँ । अंग्रेजी मुभीचाहिँ म घरमै बसेर डिभिडीमा हेर्थें । कम क्वालिटीको हुने कारण युट्युबमा खासै फिल्म हेर्दिनँ ।
मेरो ‘चाइल्डहुड क्रस’ मेलिना मानन्धर हो । म यो कुरा उहाँलाई भेटेँ भने भन्नेछु । उहाँ त मेरो यस्तो क्रस हुनुहुन्छ कि त्यसको कुनै मापन नै छैन । उहाँका धेरै फोटो मेरो घरमा टाँसेको छु । मैले अभिनय नबुझ्दै उहाँको फ्यान भएको थिएँ ।
तपाईंलाई मन पर्ने अभिनेत्री को हो ?
धेरै हुनुहुन्छ । मेरो ‘चाइल्डहुड क्रस’ मेलिना मानन्धर हो । म यो कुरा उहाँलाई भेटेँ भने भन्नेछु । उहाँ त मेरो यस्तो क्रस हुनुहुन्छ कि त्यसको कुनै मापन नै छैन । उहाँका धेरै फोटो मेरो घरमा टाँसेको छु । पहिला म उहाँको एकदमै ठूलो फ्यान हो । उहाँलाई मन पराउने वेला मलाई अभिनय भनेको नै थाहा थिएन । मलाई उहाँ मान्छे नै मन पथ्र्यो । अहिले पनि वेलावेला उहाँका पुराना मुभीहरू हेर्छु ।
कुनै अभिनेत्रीसँग अभिनय गर्न मन छ ?
सबै अभिनेत्री एकदमै खतरा अभिनय गर्ने नै हुनुहुन्छ । मलाई पछिल्लो समय मन पर्ने अभिनेत्री नम्रता श्रेष्ठ हो । लक्किली उहाँले मेरो भिडियो ‘मायालु मुहार’मा खेल्नुभएको छ । ‘जायरा’ फिल्मका लागि पनि उहाँकै लागि गीत गाउने अवसर पाएको थिएँ । अभिनय नै गरेँ भने उहाँसँगै गर्न मन छ ।
फिल्म बनाउने कुनै सोच छ ?
म फिल्ममा एकदमै रुचि राख्ने मान्छे हुँ । यो क्षेत्रमा मेरा धेरै साथी छन् । यसको भित्री कुरा धेरै बुझिरहेको छु । फिल्म बनाउनजस्तो गाह्रो र साहसी कुरा केही पनि होइन रहेछ । फिल्म बनाउनेबारे त म अरू १० वर्ष सोच्नै सक्तिनँ ।
#सन्तोष लामा # मेलिना मानन्धर # क्रस
हेटौंडामा सञ्चालित अवैध क्रसर बन्द गर्न निर्देशन, बालुवा प्रशोधन उद्योग भत्काइयो
नियम विपरित संचालन भएका सर्लाहीका सबै क्रसर उद्योग बन्द गर्न निर्देशन
स्थानीयलाई अवैध क्रसर सञ्चालकको धम्की
महोत्तरीका सबै क्रसर बन्द गर्ने निर्णय